Willian Oo Jawaabtii La Sugayay Ka Bixiyey Wada-hadallo Qarsoodi Ah Oo La Sheegay Inuu La Yeeshay Jose Mourinho - Gool24.Net
Willian Oo Jawaabtii La Sugayay Ka Bixiyey Wada-hadallo Qarsoodi Ah Oo La Sheegay Inuu La Yeeshay Jose Mourinho
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Chelsea ee Willian ayaa waxba kama jiraan ka dhigay warar sheegayey inuu wada-hadallo sir ah la yeeshay tababaraha Tottenham ee Jose Mourinho, kaas oo la wariyey inay isla soo qaadeen inuu kula biiro Spurs.
Xiddiga reer Brazil oo heshiiska uu kula jiro Chelsea ku egyahay bisha dambe ee June, ayay u gacan haadinayaan kooxo reer London ah oo doonaya in marka uu ka baxayo Stamford Bridge uu iyaga u wareego, waxaana tartan ugu jira kooxo reer London ah iyo kuwo dibedda UK ah oo adeeggiisa u bogay.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa dhowaan qoray in Willian ay khadka telefoonka ku wada hadleen Jose Mourinho oo u sheegay inuu White Hart Lane yimaaddo, qaynta ka noqdo mashruuca uu ku dhisayo kooxdaas, hase yeeshee Willian jawaab ka bixiyey warkaas kuna tilmaamay kuwo aan sal iyo raad toona lahayn.
Willian oo usbuucii hore kasoo laabtay Brazil oo uu ku maqnaa waqtigii fasaxa ciyaaraha loo geliyey fayraska Korona, waxa uu yidhi: “Dhowaanahan wax xidhiidh ah lamaan yeelanin Mourinho.
“Intii aan halkan kusoo laabtay, marka aad waddanka dibedda kasoo gasho waxa aad waqti ku jiraysaa karantiil. Illaa haddana gurigayga kamaan bixin, sidaa darteed markii aan arkay sheekada ah inaan la kulmay Jose Mourinho, layaab ayay igu noqotay.”
Willian waxa uu sheegay in waqti hore iskugu dambaysay tababaraha reer Portugal waxaanu yidhi: “Xattaa kulama aan hadal telefoonka, sidoo kalena lamaan kulmin, sababtoo ah dibeddaba umaan bixin.
“Sidaa darteed, aniga oo daacad ah, sheekadani run maaha.”